Romantic Doctor, Teacher Kim ဆိုတဲ့ ဒီ တောင်ကိုရီးယားရုပ်သံစီးရီးလေးဟာ အခုမှ လွှင့်နေဆဲ စီးရီးဖြစ်ပါတယ် ... နိုဝင်ဘာ ၇, ၂၀၁၆က စတင်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ ဇန်န၀ါရီ ၁၀, ၂၀၁၇မှာ ပြီးစီးမယ့် ဒီစီးရီးလေးဟာ အပိုင်း (၂၀) ပါဝင်ပြီး SBS ကနေ တင်္နလာနေ့နဲ့ အင်္ဂါနေ့တွေမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသပါတယ် ...
"Hand of God" လို့ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် "Boo Yong-Joo"ဟာ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ပဲ ပျောက်ချင်းမလှ ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ် ... နောက်ပိုင်းမှာ Teacher Kim လို့ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီး သူ့ကိုယ်သူ Romantic Doctor လို့ ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ် ...
Kang Dong-Joo နဲ့ Yoon Seo-Jung တို့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေဖြစ်လာပြီး Teacher Kim နဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလည်းဆိုတာ အားပေးလိုက်ကြပါဦးလို့ ...
Teacher Kim အဖြစ် Han Suk-kyu
Kang Dong-Joo အဖြစ် Yoo Yeon-seok
Yoon Seo-Jung အဖြစ် Seo Hyun-jin တို့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
Viki မှာ လောလောဆယ်တော့ Rating 9.6 ဖြစ်နေပါတယ် ...
ဒီရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ဆေးလောကအကြောင်းတွေကို ကြိုးစားပြီး ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့
>>> Eaint Chu San <<< ပါ ... ကိုယ်အရမ်းကြီးနားမလည်တဲ့ ဆေးလောကဆိုင်ရာစကားလုံးတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီး ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်တဲ့ ... အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါကြပါလို့ ...
Episode 20 (ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
Posted by mmtv95 at 11:52:00 PM 18 comments:
Labels: 2016, Drama, Korea, Romance, Series
Posted by mmtv95 at 12:40:00 PM2comments:
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စိတ်ဂယောင်ချောက်ခြားဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ စိတ်ဝေဒနာတွေကို ကုစားတဲ့အနေနဲ့ စွန့်ပစ်ထားတဲ့ အဆောက်အဦးတစ်ခုမှာ ညစောင့်အနေနဲ့ အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ် ... ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးညမှာတင်ပဲ ဒီအဆောက်အဦးထဲမှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သူတွေ့ရှိခဲ့တယ် ... သူ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အာရုံခံစားမှုတွေက တကယ်ပဲလား ... စိတ်ကူးထဲမှာ ဖြစ်နေတာလားဆိုတာ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦး ...
ဒီကားလေးဟာ ၂၀၁၅မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Horror,Thriller, Mystery အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် ... IMDb မှာ5ရရှိထားပြီး ခြောက်ခြားတာတွေ ကြောက်လန့်တာတွေကို ကြိုက်နှစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ် ...
ဒီကားလေးကို Sis Eaint Chu San က ဘာသာပြန်ထားပေးပြီး mmtv95 မှ တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် ....
>>>Download and Watch (325Mb)<<<
Posted by mmtv95 at 10:21:00 PM2comments:
Labels: 2015, Horror, Mystery, Thriller
သရဲကားတွေ ခြောက်ခြားစရာကားတွေ ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ...
2015 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တယ့် Thai Horror Movie ဖြစ်တဲ့ Run Phee (Senior) ဇာတ်ကားလေးပါ ... ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ မင်းသမီးက ၁၂တန်းေ ကျာင်းသူဖြစ်ပြီး ငယ်ငယ်လေးတုန်းက ကား မတော်တဆဖြစ်ရာကနေ နာနာဘာဝတွေ ၀ိညာဉ်တွေကို မမြင်ရပေမယ့် အနံ့ခံ အာရုံရှိတဲ့သူ ... အဲ့ဒီအချိန်မှာ ၀ိညာဉ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ပေါ်လာပြီး မင်းသမီးကို အကူအညီတောင်းခဲ့တယ် .. ဘာလို့ အကူအညီ တောင်းခဲ့လည်း ဘယ်လိုတွေ ဆက်ကြမှာလည်းဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပြီး အားပေးကြပါဦးလို့ ...
ဒီကားလေးထဲက မင်းသမီးဟာ အားလုံး ရင်းနှီးဘူးပြီးသားဖြစ်တယ့် Thai ဆယ်ကျော်သက် အဆိုတော်မလေး Jannine Weigel ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ... IMDb မှာ 6.5 ရရှိထားတဲ့ Horror ကားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ...
ဒီကားလေးကို Sis Eaint Chu San က Thai Language ကနေ တိုက်ရိုက်ဘာသာာပြန်ပေးထားပြီးတော့ mmtv95 မှ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် ... အားပေးကြပါဦးလို့
>>>Download and Watch (461Mb)<<<
Posted by mmtv95 at 1:11:00 AM 1 comment:
Labels: 2015, Comedy, Drama, Horror, Mystery, Romance, Thailand
မျိုးနွယ်စုတွေနဲ့ Viking တွေရဲ့ တိုက်ပွဲအပြီးမှာ Viking ကောင်လေးဟာ ရှင်ကျန်ခဲ့သူ ဖြစ်လာပါတယ် ... သူ့ကို ကယ်တင်ပေးတဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ပေးရင်း Norsemen ကို တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ပဲ မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာပါတယ် ... သမိုင်းဦးအစက Viking တွေနဲ့ မျိုးနွယ်စုကြားက အကြောင်းတွေကို ရိုက်ထားတဲ့ ဒီ Pathfinder ကားလေးကို 2007 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့ပါတယ် ...
IMDb မှာ 5.4 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ် ... Viking ပရိတ်သတ်တွေ မျိုးနွယ်စုတွေ ကို ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ ဒီကားလေးကို နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ...
ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ထားပေးတဲ့သူကတော့ Bro Aye Chann Lwin ဖြစ်ပြီး MMTV95 က တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် ...
>>>Download and Watch (723Mb)<<<
Posted by mmtv95 at 7:40:00 PM No comments:
Labels: 2007, Action, Adventure, Drama, Thriller
ဒီဇာတ်ကားလေးကို 2007 တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ် ... Doctor Strange (2016) မထွက်ခင်မှာ 2007 အခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တယ့် ဒီ Animation ဇာတ်ကားလေးကို အရင်ကြည့်ပြီး ဖြေသိမ့်ထားပါဦးလို့ ...
IMDb မှာ 6.8 ရရှိထားပြီး Rotten Tomatoes မှာ 58% ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ ...
ဒီဇာတ်ကားကို Bro Khin Latt မှ ဘာသာပြန်ထားပြီး MMTV95 မှ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ...
>>>Download and Watch (482Mb)<<<
Posted by mmtv95 at 1:01:00 PM No comments:
Labels: 2007, Action, Animation, Fantasy
၂၀၁၆ခုနှစ် အစပိုင်းမှာ ထွက်ရှိလာတဲ့ Sci - Fi ကား တစ်ကားပါ ...
လူသူကင်းမဲ့တဲ့ ဂြိုလ်တစ်ခုမှာ ရှင်သန်ဖို့ ကြိုးစားပြီး လက်စားချေမှုတွေ သိပ္ပံအက်ရှင်တွေနဲ့ ဇာက်ကားတစ်ကားပါ ...
မင်းသား Dan Mor
မင်းသမီး Aleisha Rose တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
IMDb မှာ Rating 4.5 ရရှိထားတဲ့ Sci-Fi ကားတစ်ကားပါ ...
ဒီကားကို Bro Aye Chann Lwin မှ ဘာသာပြန်ထားပြီး MMTV95 မှ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ...
>>>Download and Watch (494Mb)<<<
Posted by mmtv95 at 8:36:00 PM No comments:
Labels: 2016, Action, Adventure, Sci-Fi
Romantic Doctor, Teacher Kim Series (2016) - မြန်မ...